★မြန်မာ့အလင်း★: အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်
အထက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ ကုလားပြည်က လူတွေပါ။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမျှော်ပါ။လူတွေရဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ငါတို့မြန်မာ့မျက်နှာ အသွင်အပြင်ပဲ။ (မြန်မာဆိုသည်မှာ ရခိုင်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ မွန် စသည့်တိုင်းရင်းသား အားလုံးကိုရည်ရွယ်ပါသည်)။ ဘုရားကျောင်းကန်တွေကို ကြည့်ပါ။ ငါတို့မြန်မာတွေရဲ့ အနုပညာတွေပါပဲ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက Marma လူမျိုးက သူတို့ရိုးရာ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလို့ ခေါင်းစီးပေးထားတာ ဘယ်နိုင်ငံက ဗီဒီယိုလဲကြည့်ပါ။ ဒီမှာကုလားတွေပြောနေတဲ့. . . ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီပြီး မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မှာ နေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလို့ပြောတဲ့ စကားမှန်ကန်ရဲ့လား စမ်းစစ်ကြည့်ပါစို့။ ကျုပ်တို့ထံကနေ အာသံ၊ မဏိပူနယ်မြေတွေကို အင်္ဂလိပ်က မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်။ အဲဒီနယ်မြေကလူတွေဟာ မြန်မာတွေပါ။ လွတ်လပ်ရေးပေးတော့ အဲဒီနယ်မြေတွေကို အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ (နိုင်ငံတွေအကြားရန်တိုက်ပေးတဲ့ အင်္ဂလိပ်ရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပါ) အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ဒေသဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ ဖြစ်လာတဲ့ နယ်နိမိတ် အသစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကပေါ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနယ်နိမိတ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ နေထိုင်လာတာ နှစ်ပေါင်းရာထောင် ရှိပြီဆိုတဲ့ စကားဟာ ဗြောင်လိမ်ထားတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နယ်စပ်ဟာ အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တစ်ဝက်လောက် မှာပါ။ ကဲ. . . ဒါဆိုရင်အခုနယ်စပ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေနေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းရာထောင်ရှိပြီလို့ ပြောနေရင် မမှန်ကန်ကြောင်း အထက်က ဗီဒီယိုသက်သေပြပြီးပြောဆိုပါ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရင်. . . အမှားက အမှန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
စဉ်းစားစေချင်တာလေးကို ဆက်ပြီး ပြောချင်တယ်။ ငါတို့မြန်မာ့ အနွယ်ဝင်တွေကို (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားသည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်) ကုလားတွေက အနိုင်ကျင့်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မြေတွေကိုလုတယ်။ ရွာသားတွေကို သတ်ဖြတ်ဓါးပြတိုက်တယ်။ ထို့အတူပဲ ထိုင်းတွေကလည်း မြန်မာတွေကို မတရား (ကရင်တိုင်းရင်းသားသည် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်) အနိုင်ကျင့်တာတွေ လုပ်နေတယ်။
နအဖက ကုလားတွေ မြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်နေမှုကို တားမြစ်ဖို့နေနေသာသာ သူတို့မီဒီယာတွေက ထုတ်ဖေါ်ပြောတာတောင် မလုပ်ပါဘူး။ အခုထိုင်းမှာ မြန်မာ အလုပ်သမားထောင်သောင်း ချီပြီးဆန္ဒပြနေတဲ့ကိစ္စ နအဖနဲ့ ဒီမိုတွေက ဘာများကူညီပေးပါသလဲ? ကူညီဖို့နေနေသာသာ ပါးစပ်ကလေကုန်ခံပြီးတောင် မပြောဘူး။ ဘလော့လောကမှာလဲ.. နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူတွေဟာ မီဒီယာတွေကအမှာင်ချထားတဲ့ အဲဒီကိစ္စတွေကို ထုတ်ဖေါ်ဆွေးနွေးတာ မလုပ်ပါဘူး (နအဖမကောင်းဘူး၊ ဒီမိုမကောင်းဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သင့်တယ်၊ မ၀င်သင့်ဘူး စတာတွေပဲ အပ်ကြောင်းထပ်နေတယ်) ခင်ဗျားတို့ကို အဓိကပြောချင်တာက. . .ကျုပ်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဗျ။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စံနမူနာထားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြတ်ဗုဒ္ဓကိုသာ စံနမူနာထားရမှာဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ.. သူကိုယ်တိုင် ဦးစွာကျင့်ကြံပြီးမှ သူများကို ပြောဆိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ အမူအကျင့်ကို စံထားရမှာပါ။ တနည်းအားဖြင့်. .. သူများမဆုံးမခင် မိမိကိုယ်ကို အရင်ပြုပြင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် နအဖနဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေကို အတင်းမပြောခင် မိမိအားနည်းချက်ကို စမ်းစစ်ပြီး အရင်ပြုပြင်ပါ။ ကျုပ်တို့မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကြီးအတွင်းမှာ စာရိတ္တပိုင်း၊ ရိုင်းပင်းကူညီမှုအပိုင်း၊ ပရဟိတစိတ်ထား၊ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် စတဲ့ နေရာတွေမှာ အရမ်းကို အားနည်းနေတယ်။ မိမိနဲ့မဆိုင်ရင် ဘေးကနေလက်ပိုက်ပဲကြည့်ချင်တယ်။ တခါတလေ ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်တယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးရွားလဲဆိုရင် လမ်းမှာ မြန်မာအချင်းချင်းတွေ့ရင်တောင် မသိဟန်ဆောင်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်နော် . . ကျနော်တို့.. ခင်ဗျားတို့တွေက မိမိလူ့ဘောင်ကြီးအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုး၊ သာသနာ့အကျိုးကို ဘာမှမလုပ်ပဲ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို တိုင်းပြည်ချစ်ဖို့ ဆိုဆုံးမနေတာ မှန်ကန်ရဲ့လား?။ ခေါင်းဆောင်ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေပါစေ နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်တို့က ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ပညာရေး၊ ငါ့အလုပ်၊ ငါ့ကိစ္စစတဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်ပဲ ကြံဆလုပ်ကိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ (တနည်းအားဖြင့် နောက်လိုက်ကောင်း မဟုတ်ဘူးဆိုရင်) ဘာမှထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းဆောင်ဟာ အရည်အချင်းဘယ်လောက်ပဲ ညံ့နေပါစေ။ ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေက အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ဟာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါ။ ထိပ်တန်းနိုင်ငံဖြစ်လာမှသာ တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့ ကျုပ်တို့မြန်မာ့အနွယ်ဝင်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်ကို အန္တာရယ်ပြုမယ့် ပြည်တွင်းပြည်ပရန်တွေကို အစိုးရက ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘ၀တွေဟာ သာယာလာမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်တိုင်းပြည်အကျိုးနဲ့ ခင်ဗျားတို့အကျိုးရှိစေချင်ရင် . .. အတင်းပြောပြီး အချိန်မဖြုံးပါနဲ့။ ပရဟိတ္တစိတ်နဲ့ ငါတို့တိုင်းပြည်၊ ငါတို့အမျိုးဘာသာ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကျပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ အခုတိုက်တွန်းချက်ဟာ… တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာရေးတဲ့ စာအုပ်ကြီးထဲကလို ဆန်းပြားတဲ့ ဝေါဟာရတွေ တစ်ခုမှတော့ မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့ လက်တွေ့ကျတဲ့ တိုက်တွန်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:13 PM